GAM’ADIID:-Geesi Lagu Gar-darroonayo!!! | Voice Of Somalia
GAM’ADIID:-Geesi Lagu Gar-darroonayo!!!
“Siyaasigan dhulkeeniyo dalkii gaalada u dhiibay
Waxmadhawrsadahan miidhanee dhinac na eegaynin
Dhan loo dayo ba nimankaa bulshada dhaawaca u geystay;
Waa waxaan dheg xumo diidinoon ceeb ka dhiidhiyine
Dharaartii kasta ba eel hor laa looga dhacayaaye
Nin ba macallinkii wax u dhigay dhalan wadaagaane
Isticmaarkii naga dhoofayiyo gaalkii baa dhalaye!”
M/Gabay: “Waxmadhawrsade!”—W.C.: Gabyaa Gama’diid
Ummadaha dunida ku dhaqan waxa ay ku kala duwan yihiin siyaalaha ay u la dhaqmaan geesiyaashooda iyo geyllamayaashooda. Qaar ayaa wanaajiya, taallo heer qaran ah u sameeya, oo sooyaalkooda manhajka waxbarashada ku dara; halka qaar kale na ay xumeeyaan, si heer hoose ah na u aasaan, oo sooyaalkooda siyaasadeeyaan. Reerka Soomaaliyeed ee Geeska Afrikada Bari ku nool, waxa ay dhaqanwadaag la yihiin qoladaa dambe, oo ay u arkaan in ay si wanaagsan(!) u maamuuseen haldoorradoodii qiimaha iyo qaayaha badnaa! Tagtada Soomaalida lagu ma hayo iyaga oo halyeeyayaashoodii iyo halgamayaashoodii, nolol ahaan, darajo ku tolay, oo maamuus ummadeed oo sarreeya u sameeyay! Beryo dambe, waa waagii ay Soomaalidu qaramooday e, xattaa kuwo heer qaran maamuuskooda la gaadhsiiyay, qabiillooyin biro qabyaaladeed ku boodboodaya ayaa halkaas ka soo dejiyay oo heer qabiil ku soo celiyay! Maanta, Soomaalida, haddii qof wal ba aad weyddiiso halyeeyada Soomaaliyeed waa kuwee, illeen ummad wal ba halyeeyo ayaa ay lee dahay e, waxa ay u badan tahay in aannu qof na kuu sheegin, ama ku cidwadaag yihiin kuu sheego! Mid kale isla weyddintaa haddii aad warsato, warcelin ka duwan tii hore ee aad haysay ayaa uu kugu jalbeebayaa! Taasi waa sabab ka mid ah sababihii burburka Soomaalida iyo qarannimada Soomaalida ba. Waayo, waa ummad aan lahayn mudanayaal iyo marwooyin ay si bulsheed u maamuusaan! Waxa aan ujeedaa: waa ummad aan lahayn wax ay wadaagaan oo si wadajir ah ugutasbiixsadaan!
Cabdiwaaxid ina Cali Gama’diid waxa uu dhalasho ahaan ka soo jeedaa shacabkaas weli aan si runah u qaramoobin, nin weli baa na adeerkii darajada halyey ku tolay, qol gudihii na uu ku xuso, weli na maankiisu baayirin! In kasta oo uu yahay nin dhallinyaro ah, xaasley ah, oo ku fooggan nolol wanaajinta reerkiisa iyo dhisme ballaadhinta goob nololeedkiisa, hadda na, mar na ba ka ma aannu caajisin wax-u-sheegga tolkiisa qaayibay, sarraynta shisheeyaha iyo u hoggaansanka danihiisa istiraatiijiyadeed. Tabtii cabqarigii weynaa ee Ustaad Sayyid M. C. Xasan (I.H.U.N.) ayaa uu isku dayaa tix ahaan in uu ku baraarujiyo, had ba qallafsanaanta noloshooda iyo garasho dhoohanaantooda ku tuso, ku na dhiirri geliyo heeryada gumaysiga ee cimri-dheeraatay in ay iska qaadaan. Dedaalkaa joogtada ah iyo gabayadiisa dan iyo dareen ka hadalka ah, ku ma aannu helin wax xurmo iyo xaqdhowr ah—Oo maxaa uu ugu helayaa, ma Soomaali baa ay wax iska beddeleen garashadeedii, dareenkeedii, fekerkeedii, iyo dhaqankeedii?! Wax wal ba ha lagu sameeyo e, waa caado jirtay (iminka na jirta) in same ka hadle wal ba iyo is beddel doone wal ba cadaab karkaraysa la muquuransiiyo e, waxa uu naftiisa ballan adag oo weyn kaga qaaday in aan ay ka tanaasulin aragtiyadeeda, iilka ha ba la dhigo e!
Wax ba yaa aannu dhaqaale iyo awood haynin e, waxa uu hayaa niyad iyo awood qalbiyeed oo wax loo dhigaa aan ay jirin! Taasi waa ta ku tamar gelisa, itaalkiisu ha ba yaraado e, eray maanseedkiisu in aannu ku xadgudbin casharrada ku dawinan qalbigiisa, isla jeerkaa na iyaga oo firfircoon faruuryihiisa ka soo baxaan, si dareenkoodu iyo awooddoodu ba qalbiga qofka Soomaaliga ee qabyaaladdu weli xoogga ugu taliso kaga gargariiriyaan, kaga na naxsadaan ceebaha iyo cadaawadaha ku dhex galgalanaya! Diiradda kolka uu saaray xanuunada ay la luudayso bulshadiisu, waxa uu arkay in ay ugu waaweyn yihiin afar arrimood: aqoon darro diineed iyo dhaqaneed; qabyaalad la siyaasadeeyay; kal aaminbax weynaaday; iyo faragelin xididaysatay! Isla diiraddaasi, baadhis kale oo ay ku samaysay abuurayaasha ugu waaweyn ee fayrasyadaasi, waxa ay soo qabatay siyaasiyiinta, wadaaddada, iyo ganacsatada. Sidaa awgeed ayaa uu wacad ku maray, mas madaxa ayaa laga dilaa e, bulshada taagta darran ee tiihaysa in uu la safto, oo nimankaa uu siyaasigu ugu tunka weyn yahay gantaallo qaaradeed roob kaga dhigo! Si fiican waxa gantaalladaa looga dhex arki karaa, isla jeerkaa na dhumucdooda iyo dhismahooda layaabka leh lagu anfariiri karaa, tixaha: “Waxmadhowrsade,” “Boqol Doofaar,” iyo “Cirir.”
Riwaayadaha siyaasadeed ee Beesha Gaaladu Soomaalida dayaysan u allifto, iyo siyaasiyiintii la doonayay in ay danta bulshada u dhididaan, ee hubaashii darxumaynta bulshada u dhididay, ayaa uu aad iyo aad uga gilgishay, dareenkiisa na ku guubaabisay in aannu gabban, ee seefta afbadanta ah ee cadowga ummadda Soomaaliyeed ilko caddayn iyo qalbi adayg ku waajaho! Waa halkaa halka ay Gama’diid iyo doofaarrada iyo dayuusyada degellada Soomaalida ka taliyaa ay isku qoonsadeen, dhaar na ugu mareen qaaf wal ba oo afkiisa ka soo baxa qolka ugu qadhmuunka badan ee jeelasha waxgaradka lagu cadaabo hoy in looga dhigi doono! Ka hor tixdiisii “Dardaaran” ayaa uu soojeedimo dhowr ah ku caddeeyay isaga iyo siyaasiga Soomaaliyeed nacaybka weyn ee u dhexeeya. Soo if bixiddii tixdaas, oo ku faraxday ku na digatay Kiinyaatiga Soomaalida naarta Sawaaxiliga ka waraabin jiray (eegga na ka waraabiya), jabkii gaadhay xarun ganacsiyeedkoodii Westigeyt, ka dib markii rag rag ahi cashar taariikheed lama illaawaan ahi u dhigeen, waxa ay nimankaa diirka Soomaaliyeed leh, bal se matoorkoodu Galbeedka yahay heleen marmarsiinyo ay, gabyaaga ku xidhi karaan, sida oo kale na lacago badan kaga heli karaan ragga ay awrkiraalaha u yihiin.
Xadhiga Gama’diid halkaas ayaa uu ka bilaabmay. Isla Hargeysadan oo uu caawa ku xidhan yahay ayaa lagu xidhay! Waxa ay beeshiisa Ciidagale iyo rag kale oo wanaagsan ba dhexda u xidheen ka sii daynta haldoorkan dheemanka ah waraabayaasha halyey-cunka ah. Tijaabadaasi ma ay guul darraysan; aad iyo aad ayaa ay Soomaalidu u soo dhawaysay tallaabadaas dhanka caddaaladda iyo xorriyadda loo qaaday. Tolow Soomaalilaan maxaa ay ku xidhay gabyaaga illeen iyada ma uu dhaliilin e—xattaa dhaliil jirta oo cad?! Walaalaheenna Kiinyaatiga ah maxaa aad jabkooda ugu faraxday ayaa loo xidhay! Laakiin boqollaalka Soomaalida ah ee Kiinya deggan ee nafahooda iyo maalkooda dawladda Uhuuru Kinyaata ku xadgudbayso, iyo gumaadka ay u geysanayso bulshada Soomaaliyeed ee koonfurta deggan, cid ka hadlaysa oo u diirnaxaysaa ma ay jirto! Maxaa looga hadlayaa sow argagaxiso khatar ku ah amniga Kiinya iyo Geeska Afrika ma aha?! Kol haddii ay Soomaali yihiin, iskood u shaqaysanayaan oo ganacsi firfircoon lee yihiin; ama ay se Alshabaab la jidh yihiin oo waxa ay Kiinyaatiga ku sameeyaan iyaga laga aargoosanayo, sow argagaxiso dhab ah ma aha?! Oo taasi sow ma aha tii mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku khasabtay dadkiisii la gumaaday ee maydkoodii bahalladu cuneen in aannu u tacsiyayn, bal se ciidamadii lagu shahiiday inta uu uga daba tegay dalkoodii, u madax-foorariyay—illeen sida kale haddii uu samayn lahaa waxa uu noqon lahaa madaxweyne argagaxiso ah e?! Waxa Cabdiwaaaxid loo aqoonsaday argagaxiso ka dib markii uu la saftay bulshadiisa, farxaddooda na kala qayb galay tix sida qoryaha casriga ah ee darandoorriga u dhaca u dhacaysay!
Mar kale ayaa tixmaalkaa isla gabaygaa laftirkiisa Buntilaan gudaheeda loogu xidhay. Isla kiiskii Soomaalilaan iyo caqliyaddii lagu dhisay ayaa loo cuskaday xadhigiisa—illeen doofaar meel uu joogo ba waa doofaar uun e! Markan, in ka badan bulshadii ka cadhootay xadhigiisii hore ayaa ka cadhooday! Hal-abuurrada reer Buntilaan, gude iyo dibad ba, qof wal ba dareenkiisa awooddii uu ku cabbiri karayay ayaa uu ku cabbiray, isaga oo dawlad-goboleedka Buntilaan ka codsaday afmaalka xorriyaddiisa in ay u soo celiyaan. Tabta oo kale hal-abuurro reer Waqooyi ah ayaa xadgudubka muwaaddinkan lagu la kacay ka gabyay—weli ba si aad ah! Siyaasigu intaas wax ba kuma sii daayo e, waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda gobolka Waqooyi-galbeed ka yimid wefdi ballaadhan oo duubab ah, uu na hoggaaminayay suldaanka beesha Ciidagale, ah na, sida oo kale, suldaanka guud ee beelweynta Sheekh Isxaaq, suldaan Maxamed suldaan Cabdulqaadir, kuwaas oo gorgortan iyo gardhigasho ka dib ku guulaystay ujeeddadoodiii, si dirqi ah oo mucjiso-u-eke ah na Cabdiwaaxid kala baxsaday gacanta saraakiil ma-naxayaal ahaa oo toogashadiisa tabaabushaynayay!
Muddo ka dib waa tii wargeys-gaaleed Faransiiska ka soo baxa (oo magiciisu yahay: Charlo Hebdo) uu aflagaaddeeyay Suubbanaheenna Qaaliga ah ee Maxamed (NI.N.K.H.A.) Arrintaas, oo dalkaas ku soo noqnoqatay, waa tii ay Muslimiintu aad iyo aad uga cadhoodeen, walaalo ka mid ahi na jawaab waafi ah oo habboon ka bixiyeen. Weerarkii cajiibka ahaa ee dhacay Nofeembar 13, 2015, waxa uu Cabdiwaaxid—oo looga bartay in uu ka gabyo falcelisyada nool ee Muslimiintu gaalada ku karbaashaan si ay u baraan dadnimadooda iyo in ay yihiin, duul ilaashan kara mabaadiidooda iyo danahooda—curiyay tix dareenka Soomaaliyeed dhaqaajisay, oo uu magac uga dhigay: “Isha Cali U Fiirsada!” Durba ninkii gaalkalkaalka ahaa markii uu dhegaystay waxa uu degdeg u amray argagaxisadan bulshada ku jirta in la xidho, oo weli ba xabsiga damiin iyo wax kale ba looga sii dayn, muddo dheer na halkaa maxbuus ku ahaado! Bulshadu falkaa aad ayaa ay uga xumaatay, laakiin ma ay laha awood ay wax ku beddelaan oo ku wanaajiyaan! Yablas xoog leh ayaa dadkeenna ka soo yeedhaya ilaa iyo aminka, maadaama ay yoolyoolnimo yaab leh ku sugan yihiin; ha se ahaato e, ma jiro (ama waa naadir) rag yididdiilo badan qaba oo ay ka go’an tahay bulshadooda in ay ka samatabixiyaan aafooyinka kala jaadka ah ee ku habsaday!
Arrin aan aad u la yaabbay baa jirta! Gama’diid oo lix bilood ku xidhan gurigii uu ku barbaaray, ku weynaaday, ee uu ku guursaday, ilaa iyo hadda beeshiisa Ciidagale ee labadii jeer ba badbaadisay, isku day-yo badan oo muhiim ah oo ay inankooda dhurwaayaasha kaga celinayaan ma ay samaynin! Ilaa iyo eegga ma aan fahmin sababta ay awoodo badan iyo beeso badan ugu qarashgaraynayeen sii dayntiisa kolalkii hore, muggan na dedaal caaqibo leh u la iman waayeen, la na moodaa in ay daaleen, oo hadal niyeedkoodu yahay: “Adeerow adiga ayaa is xidhay e, mar wal ba kuma badbaadin karno e, halkaagaa ku jir—sidaa iyo kulanti dambe!” Weyddiimuhu waxa ay yihiin: Ma isaga ayaa is xidhay mise xaq uu sheegay ayaa lagu xidhay?! Ma guul darrooyinka gaalada gaadhay ee lagu farxay ayaa dambi ah, mise muwaaddin xuquuq iyo waajibaad leh oo aan wax ba geysan ku xadgudubkiisa ayaa dambi ah?! Ma geyllame arrin uu guntiga u adkaystay caqabadihii uu kala kulmay oo badnaaday baa khaladka leh, mise cadowga hadh iyo habeen aan daalayn ee halyeeyada iftiin iyo mugdi in uu ku qasho doonaya ayaa khaladka leh? Si kasta ba xaaladdu ha noqoto e, gooshu ba waa ay garataa dhasheeda lagu gar darroonayo in ay jeer wal ba difaacdo e, waa in ay Ciidagale mar wal ba is garab taagaan geyllamahaa xorta ah, dabin wal ba oo loo dhigo iyo god wal ba oo lagu tuuro na waa in ay kala soo baxaan—illeen maanta geyiga Soomaaliyeed dawlad Soomaaliyeed oo madaxbannaan oo muwaaddiniinteeda sinnaan, caddaalad, iyo xorriyad ku dhaqaysaa ma jirto e! Waxa aan xaaladda uu haatan mudanahaasi ku sugan yahay u arkaa, mid ay beeshiisu mas’uulka tahay, maadaama ay dhiiggoodii uga raalli noqdeen qol madow in uu waagu ugu baryo, gudcurku na ugu soo galo! “Tol waa hal la qalay,” ayaa ay Soomaalidu ku maahmaahdaa e, Ciidagale intiisa gobannimadu weli ku dambayso, waxaa waajib ku ah, in ay u gurmadaan Gama’diid, oo gunnimada lagu khasbayo uga gargaaraan! Haddii kale waxa uu noqon doonaa: geesi jifadiisii gumeeyeen!
Mid kale oo iya na layaab leh ayaa jirta! Dhallinyaradii wanaagsanaa ee reer Waqooyiga ahaa ee shalay Buntilaan u gabyayay, maanta maxaa aamusiyay oo afka ka sharooteeyay, oo illawsiiyay walaalkooda dulman u hiilintiisa?! Ma waxa ay ka baqayaan haddii ay ka hadlaan gaboodfalka lagu la kacay in iyaga na laga daba geeyo?! Mise shalay jibbo iyo hilib-damqasho ayaa ay ka ahayd o, maanta waa nin tolkii u xidhan, iyagu na sidaa u garteen?! Si kasta ba ha ka ahaaato e, waa weyddiin weyn oo garaadkooda saaran: Maxaa shalay idin ka hadalsiiyay oo maanta na idin af tiray?! “Jidh qalaad waa dhul qalaad,” ayaa ay Soomaalidu ku maahmaahdaa e, in Cabdiwaaxid dhulkii uu garanayay lagu gumeeyo, sidii cadowgu doono na u la dhaqmo, waa xujo iyo yaab!!!
Hadalkayga waxa aan ku soo gebagebaynayaa, dardaaran iyo duco. Geyllamayaasha la midka ah ina Cali Gama’diid waxa aan lee yahay: Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa, “Dabkii daashka kaa guba digniin baad ka qaadataa,” e, dhacdadaa jaallaheen na ku dhacday waa ay innagu wada dhacday; sidaa daraaddeed, waa mid ay tahay in aynnu isku si uga soo horjeedsanno, u na halganno sidii awood, af, iyo qalbi ba walaalkeen ugu hiilin lahayn. Halkudhegyadeennu waa in ay noqdaan: “Darajaynta Gama’diid waa darajaynta garaadleyda xorta ah,” iyo “Midaynta dareenka buuniyada waa midaynta dareenka bulshada.” Innaga ayaa xaq u leh in aynnu wax hoggaamino e, horta aynnu cududdeen na dhisno, isu damqashadu na sees weyn ha u noqoto. Xaqiiqdii, maanta, qoyskeenna maalin uu inooga baahi badan yahay ma ay jirto! Xaalad damdaguugnimo ah ayaa ay dhan wal ba kaga sugan yihiin! Camiilladaas gaaladu soo carbisay carcaraaf ayaa ay inoo geysatay; sidaa aawadeed, cidhibtirkooda waa in aynnu iska caawinno, oo muuqaaalkooda carceerinno. Gaaladu waxa ay doonayaan in ay na mooradduugaan, siyaasigu na waa kalkaaliyaha weyn ee kabasiibnimadeena u adeegsanayaan! Sidaa awgeed, hal-abuurradeennu waa in ay u hawshoodaan sidii bulshadan hawammareennadooda haybo badan hantiyiddooda u halgamayaan yur looga odhan lahaa, oo hilibkeeda bisil loo basrin lahaa! Ilaahay (S.W.T.) waxa aan uga baryayaa geesigaa in uu ka sii daayo gunta uu u xidhan yahay, sida ugu dhakhsaha badan, sida ugu roon—aamiin. Haddii aad aan wax ba tari karin af iyo addin ba, walaal qalbiga uga ducee, oo salaad wal ba dhexdeeda ugu ducee—intaasi waa waxtar weyn e.
(Qoraalkan oo aan isla bishii la xidhay qoray, waa aan jeclaan lahaa in aad akhriso .. kan iminka na waa qormadii labaad oo aan xadhigiisa ka qoro.)
W.Q.: Maxamed Cabdirisaaq Saciid “Samiik”
Qoraa iyo aqoon baadhe Soomaaliyeed
Boosaaso, Buntilaan, Soomaaliya
Maleeshiyaadka Dowladda Xamar oo Darawal Bajaaj Si Naxdin leh u Dilay